I-China Ceftiofur Sodium ye-injineli yeMveliso kunye nefektri | Iqela leqela leTypt
Imhlophe kwimpuphu etyheli.
Izimpawu: le mveliso iluhlobo lwearhente ye-antimicrobial kwaye isetyenziswa ikakhulu kunyango lokosuleleka kwiintaka zasekhaya nakwizilwanyana ezibangelwa yintsholongwane ebuthathaka.
Kwinkukhu isetyenziswa ekukhuseleni ukufa kwangoko okubangelwa sisisuichi coli.
Kwihagu isetyenziswa kunyango lwezifo zokuphefumla (iihagu bacterial pneumonia) ezibangelwa yi-actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurella multocida, salmonella cholerasuis, streptococcus suis, njl njl, izifo zamathumbu ezibangelwa sisisuichi coli kunye nokusilela kwangoko kwehagu zabantwana ezibangelwa yintsholongwane.
Kwiinkomo zisetyenziswa kunyango lweenyawo ezingcolileyo kunye neepidilitha ebangelwa yifusobacterium necrophorum okanye i-bacteriin evelisa i-melanin, izifo zokuphefumla ezibangelwa yi-pseudomonas aeruginosa, pasteurella multocida okanye i-Hemophilus somnus kunye nesibeleko emva kokubeleka okanye i-mastitis kwimazi yeenkomo zobisi ezibangelwa yi-clostridium, gram negative anaerobe okanye i-bacteria yokuhlanjululwa. ikwasetyenziswa nakwiinkomo ngokwamanqanaba okuqunjelwa.
UkuSebenzisa kunye neDosi:
Nyibilikisa yonke ibhotile yale mveliso kwi-10 ml ekhethekileyo yokuhluza.
iihagu: inaliti yemithambo, 0,6 ～ 1ml (30 ～ 50mg) / 10kg ubunzima bomzimba, kube kanye ngosuku kangangeentsuku ezi-3 ezilandelelanayo.
iinkomo: isitofu sokulimala kwemithambo-luvo, 1 ～ 2ml (50 ～ 100mg) / 50kg ubunzima bomzimba, kube kanye ngosuku ngeentsuku ezi-3 ezilandelelanayo.
inkukhu: Nyibilikisa le mveliso ngesicombululo sokuthintela iyeza okanye isitofu samanzi kwisitofu esi-1000ml kwaye ulawule i-0,2ml （0,1gg） yesi sisombululo ngenaliti ye-hypodermic entanyeni ngesirinji engenawo. Iinaliti ezingama-26 okanye ezinye inaliti ezizenzekelayo. inokuphinda ilawulwe ngogonyo lwe-marek ngaphandle kweempembelelo kwi-potency yesitofu sokugonya se-marek.
izaziso: umbala wale mveliso unokutshintsha ukusuka kumhlophe njengombala omthubi. Ukutshintsha kombala akunaziphumo kwimbonakalo yale mveliso. Le mveliso inokugcinwa kangangeyure ezili-12 kubushushu begumbi, kangangeentsuku ezisi-7 kwi-2 ～ 8 ℃ nakwiiveki ezisi-8 ukuba ikhe yabakho kungatshintshi potency kunye nepropathi yomzimba okanye yeekhemikhali. thambisa imveliso eqandusweyo ngamanzi aqabileyo ahambayo ngaphambi kokusetyenziswa. Phakamisa ngokulinganayo ukukhawulezisa inkqubo. inokuncitshiswa kubushushu begumbi. Le mveliso inokuqandeka kuphela kwaye inyibilike kube kanye.
ixesha lokurhola: 0 usuku.
iinkcukacha: I-0.5g / ibhotile
indawo yokugcina: tywinwa ngokuqinileyo kwaye ugcine kwindawo ebandayo ukukhusela ukukhanya.
ixesha lokuqinisekisa:iminyaka eyi-2.
Edlulileyo: Ivermectin kunye neClantantel In sindion
Okulandelayo: I-Diminazene Aceturat kunye nePhenazone Granules yesitofu